केन्द्रीय रूस मा, साइबेरिया - वनको प्रशस्त। समय हाम्रो पुर्खाहरूको काठ बाहिर आफ्नो घर निर्माण अतिप्राचीन कुनै आश्चर्य। टाइल रूपमा छाप्राहरू अफ्रिकी कुल, पाम पात ढाकिएको। पर्वतमा गाउँमा dwellings र पनि बाड boulders को निर्माण गरिन्छ।
के सुई, को Eskimos, असीमित हिउँ मरुभूमि को राष्ट्रिय घर बनायो? कि हिउँ बाहिर छ, कि त्यहाँ अधिक हो भन्ने तथ्यलाई देखि, सही छ। यो किनभने स्थिर पानी ब्लक र सुई निर्माण को छ। यी संरचना को फोटो आफ्नो आदर्श प्रकारका असर गर्छ।
बरफ घर को विवरण
यो सुई domed छ, आदर्श - नियमित गोलाकार आकृति - संरचना, को compacted हिउँ काट्न इँटा बनेको। निर्माण को आकार मौका रोजेका छ। कचौरा - आन्तरिक मात्रा गर्न सतह क्षेत्र को सानो अनुपात संग volumetric geometrical आंकडा। सतह क्षेत्रमा एक कमी गर्मी हानि कम संग किनभने यो महत्त्वपूर्ण छ।
यसबाहेक, एक आदर्श गोलाकार आकृति रूपमा हिउँ असाधारण बल देखि यस्तो टिकाउ सामाग्री को संरचना दिन्छ। हिउँ को गढ को पर्खाल तोड्न - पनि ध्रुवीय भालु समस्याको लागि यात्री को खाताहरू, अनुसार।
घरमा प्रवेश सुरुङ को "प्रतीक्षालय" छ। यो डिजाइन चिसो हावा मा प्रवेश रोक्छ।
सुई - जस्तै संरचना कि हाम्रो समय र आधुनिक शहर मा छ? कुनै एक प्रदान गर्दछ एक घरमा बस्न, को पाठ्यक्रम, तर किन देश मा बच्चाहरु संग खिलवाड छैन उत्तरका एक वास्तविक विजेता जस्तै महसुस छैन।
पहिलो हामी सुई लागि भवन निर्माण सामाग्री procure गर्न आवश्यक छ। को Eskimos को घर को लागि ईटाहरु के हो, के तिनीहरूले प्रतिनिधित्व? त्यहाँ workpiece तीन भिन्न छन्।
क्लासिक संस्करण बलियो र टिकाउ पर्याप्त हिउँ पाप्रो उपस्थिति implies। यस मामला मा, हिउँ (पाठ्यक्रम यसलाई नभएसम्म), वा पारंपरिक देख्यो आयामका हिउँ इँटा अलिकति ग्याँस सिलिकेट को मानक एकाइ भन्दा सानो कटौती।
बरफ भिजेको छ भने, यो सफल असम्भाव्य छ कटौती, तर यो पूर्ण ढाला छ। मानक इँटा आँखा द्वारा आकारको एक मानक प्रदान vyleplivaya वा स्वयं खाली (कुनै पनि सामाग्री धैर्य downed आयत) को प्रयोग गरेर निर्मित गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, तापमान तल शून्य छ भने, हिउँ छैन ढाला छ, र छाडा हिउँ सम्पूर्ण आम, फारम बिना गर्न सक्नुहुन्न। हिउँ को रूप मा राखे गर्न र हल्कासित मइस्चराइजिंग tamp हुनेछ। एक पटक ब्लक compacted, र फारम अर्को भरी नै makarom हटाइनु छ। केही समय पछि, चिसो कठोर हुनु मा ईटाहरु।
अर्को चरण "निर्माण साइट।" अंकन छ को भविष्य संरचना को केन्द्र टाँसिएको द्वारा सजिलै हुन सक्छ सिद्ध सर्कल हासिल गर्न स्की पोल र सुतली कुनै पनि टुक्रा एक सर्कल आकर्षित। को सुई आकृति कोरिएको भएपछि, राखे ईटाहरु को पहिलो पङ्क्ति बाट फसल।
तपाईं बस पङ्क्ति गरेर बाहिर पङ्क्ति राख्नु सक्नुहुन्छ, तर यो एकदम प्राकृतिक सुई छैन। नियमहरूमा अनुसार भवन निर्माण गर्न के गर्न आवश्यकता के हो?
विभिन्न हाइट्स सबै ब्लक को पहिलो पंक्ति मा। पहिलो तल एक पुरा कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग, सबै पछि को मूल्य बिस्तारै घट्छ, र सर्कल बन्द छ जब, आफ्नो उचाइ शून्य जान्छ। पहिलो घन्टी त संरचित, त्यसपछि तपाईं बस ब्लक लिन र एक सर्पिल तिनीहरूलाई स्ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ।
बस प्रत्येक पछि राउन्ड एक घरको छानो गठन, निर्माण को केन्द्र संक्षिप्त सुनिश्चित गर्न आवश्यक बिछाउने जब। तसर्थ, सम्पूर्ण घर, को घरको छानो को केन्द्र मा खोल्ने बाहेक निर्माण गरिएको छ एस्किमोको घर। यसको विशेष बन्द एकाइ राउन्ड चोटीदार भित्र संरचना आकार।
होल - एक हिउँ हट गर्न प्रवेश - पर्खाल को पतन जोगिन गर्न गर्छन् मात्रै पर्खाल माथि आरोहण कठिन हुन्छ। आदर्श, बिल्डर ब्लक सहायक पेश, र धेरै अन्त मा प्रवेश मार्फत कटौती।
को सुई को कार्य हो - यो सिर्फ चिसो बाट र भीषण उत्तरी चिसो बाट सुरक्षा भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ। इनपुट गुणस्तर लागि यो के हो, त्यसैले यसलाई बुझ्ने छ। त्यसैले, घर को चिसो हावा भित्र पस्नु छैन, यो गर्न प्रवेश एक टनेल, कहिलेकाहीं बाङ्गो को रूप मा, चिसो हावा को प्रवाह कुनै मौका छ छोड्ने छैन ताकि बनाइएको थियो।
के नै सामाग्री को सुई गरे र आगत छ गरे। यस घरको छानो बाट ब्लक दुई समानान्तर पङ्क्तिहरू राखे, र त्यसपछि निर्माण। रूपमा घरको छानो निर्माण, केन्द्र एक सानो नजिक प्रत्येक पछि नम्बर मामला छ। सम्म माथि एक अर्धवृत मा पर्खाल converge छैन यो जारी छ।
अन्तमा, घरको छानो र प्रवेश तयार पछि, सबै seams ध्यान हिउँ संग गंदा। यो बल्ल संरचना छाप।
जल क्षेत्रमा: योजना र प्रविधि
आफ्नै हातले घरमा एक विस्तार को लागि एक जग कसरी बनाउने?
संपर्क लेंस एयर Optix एक्वा (3 एकाइहरु,6एकाइहरु): एक प्रतिक्रिया निर्देशन विवरण
बच्चा मा Dysbacteriosis। रोग उपचार
कवि Nikolai Aseev। जीवनी र रचनात्मक गतिविधि
जहाँ तपाईं व्यवस्था अन्तर्गत विद्युतीय चुरोट धूम्रपान गर्न सक्नुहुन्छ?
जो wiper ब्लेड राम्रो छ? को wiper ब्लेड के हुन्?
"मानव अधिकार को लागि युवा" सेन्ट पीटर्सबर्ग विद्यालयमा सहिष्णुता एक हप्ता पकड हुनेछ।